एनआरएनए मलेसियाको छैटौँ अधिवेशनको मिति तय, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » एनआरएनए मलेसियाको छैटौँ अधिवेशनको मिति तय
एनआरएनए मलेसियाको छैटौँ अधिवेशनको मिति तय
मिति: 2019-09-01 00:00:00
देश : Malaysia
आयोजक: एनआरएनए मलेसिया
मलेसिया । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए मलेसियाको छैटौँ अधिवेशन आगामी सेप्टेम्बर १ तारिख आइतबारका दिन हुने भएको छ । शनिवार अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको वैठकल अधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।
अधिवेशन अगावै २७ जुलाई २०१९ शनिवार ५ वजे सम्म एनआरएनए मलेसियाको पन्जीकृत सदस्य नवीकरण तथा नयाँ सदस्य लिने समय अवधि तोकिएको छ ।
यस्तै संघले पाँचथर मिक्लाजुङमा भएको हत्याकाण्डमा भागेर ज्यान जोगाएकी १३ वर्षिय सीता खजुमलाई शिक्षाको लागि एक लाख रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
साथै बैठकले मलेसिया एनआरएनए कल्याणकारी कोष तथा एसिया प्यासिफिक भेलामा कबुल गरिएको रकम २७ जुलाई २०१९ सम्म उठाउँने निर्णय पनि गरेको छ ।